Home » Crack & Activators » Free CleanMyMac 3.9.3 gbawara
Free CleanMyMac 3.9.3 gbawara
site Anastasiya Libra | February 10, 2018
Ị chọrọ gị mac-arụ ọrụ ugboro abụọ dị ka ngwa ngwa? Free CleanMyMac 3.9.3 Gbawara emezu ihe ọ bụla ụbọchị. Maka nhicha gị mac, ọ dị mkpa na-ahọrọ a nri ngwá ọrụ. The CleanMyMac 3 Ebighị Number ọcha gị mac na enwekwu ya ịrụ ọrụ ngwa ngwa. Ọ bụ magburu onwe ya n'ihi ọrụ. Free CleanMyMac 3.9.3 Gbawara eliminates tụkọtara si ike mbanye na-enwekwu ndị na-agba nke gị usoro.
Free CleanMyMac 3.9.3 Gbawara Isi
CleanMyMac 3 Ebighị Number dị mfe iji. Free CleanMyMac 3.9.3 Gbawara ewepu ngwa ma ọ bụ na-akpali ndị ngwa ahịhịa ma ezughị. Site n'enyemaka nke uninstaller ọrụ ọcha ruo agadi rifọrọ erifọ na deletes apps nnọọ n'enweghị. Free CleanMyMac 3.9.3 Gbawara ga hichaa mbanye na usoro junk.
Na mac, e nwere ọtụtụ faịlụ ịchekwa dị ka usoro junk na caches. The Mac si ike mbanye na-stuffed na ochie faịlụ mgbe mac Cleaner ga-ehichapụ ndị a faịlụ ọcha usoro. CleanMyMac 3 Ebighị Key ewepu mmezi tinye-ons. User deletes, disables na atụgharịa anya ọ bụla plugins na ọ / ọ chọrọ. All na extensions na-nyere na dashboard.
Free CleanMyMac 3.9.3 Gbawara enwekwu ọsọ nke mac site nhicha nchekwa ngwaọrụ. Ọ bụ onye ọrụ enyi na enyi ngwá ọrụ na-bụ free maka ọrụ dịkwuo ọsọ na-akparaghị ókè ugboro. The ojiji nke ngwá ọrụ magburu onwe mkpa ka iwelie ọsọ nke usoro. Ọ bụ ihe ịrịba ama nke nkà na ụzụ ọhụrụ na-ewu ewu maka mfe echichi, mmezi, mmezi, telecom akụrụngwa echichi na arụmọrụ. Ọ dị mkpa ka ịmara ihe kpatara ndị ogbenye ọsọ nke internet. The ngwá ọrụ ga-eduzi gị kpọmkwem ihe mere nke onye na-adịghị ọsọ.
CleanMyMac 3 Ebighị Key-arụ ọrụ site ji atụ ọsọ nke data download na bulite na ezi ụzọ. The results na-egosipụta na ụdị eserese na ọnụọgụ data. Ọ tụrụ na kilobit na megabit. The ọtụtụ ná ndị chọrọ Bibie nke a nke. Site n'enyemaka nke a ọsọ ule ngwá ọrụ ị ga-abịa mara ezi data. Site na iji nke a ngwá ọrụ ị ga-abịa mara ihe mere ha ji gị na-adịghị ike n'ókè.
Site na iji ndị a ọsọ ule ngwaọrụ ị nwere ike nweta ọtụtụ uru. Ndị a na-ahụ maka elu-edu ọrụ na-doo anya n'ókè nke internet na ịrịba àgwà. Nke a bụ nnọọ mfe iji n'ihi na site na ịpị kpakpando button ule ga-amalite.
Good ọsọ nke gị usoro bụ ihe kasị mma isi iyi nke àjà video gụgharia, telivishọn, ndịna, data na olu nkwurịta okwu na-echeghị na nkwalite nke ndị na-agba. Free CleanMyMac 3.9.3 Gbawara bụ a zuru okè isi iyi na-enye satellite omume nkesa, USB na internet ọrụ na-egosi na a bukwanu ibu n'elu aga afọ. CleanMyMac 3 Ebighị Key bụ a mara eziokwu ahụ bụ na internet na-agba bụ a bara uru n'ọnọdụ maka ọdịnihu.
Free CleanMyMac 3.9.3 gbawara Atụmatụ
na-eme Mac ọcha na mgbe usoro Monitors na ọcha elu
emekọ niile ahịhịa na a click
Enyocha kwa gị dum usoro dị ka photos, mail, iTunes na ọtụtụ ndị ọzọ
CleanMyMac 3 Ebighị Number bụ elu-tech ọrụ n'ihi na e mere ya na pụrụ iche na elu-tech akụrụngwa. Free CleanMyMac 3.9.3 Gbawara awade a agbam ume gị internet ọsọ dị ka nke ọma dị ka ọganihu na-ewu na ụwa nke technology. Clean My Mac 3 Ebighị Number dị mfe download.
Download Free CleanMyMac 3.9.3 gbawara
kacha ọhụrụ na Version
← FL Studio 12.5.1.165 Crack KMSpico 11 Final 2018 Portable Windows na Office Activator →